कानुनबमोजिम काम नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्छौं - Karobar National Economic Daily
कानुनबमोजिम काम नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्छौं
query_builderSeptember 17, 2017 12:04 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility403
डिल्लीप्रसाद भट्ट सदस्य–सचिव समाज कल्याण परिषद्
नेपालको समाज विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट समय–समयमा ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दो रहेको छ । कतिपय यस्ता संस्थाले समाज विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ भने कतिपयले संस्थागत लाभ मात्र उठाउने तर काम र कर्तव्य भने बिर्सिने गरेका छन् ।
कतिपयले त पछिल्लो समयमा नेपालमा भएका एनजीओ/आईएनजीओले समाज विकासभन्दा पनि विभिन्न किसिमका विकृतिहरू भिœयाउने गरेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । समाजको विकासमा गैरसरकारी संस्था एनजीओ तथा आईएनजीओको काम र भूमिकाबारे राम्रो अनुभव राख्ने समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सदस्य डिल्लीप्रसाद भट्ट पनि एक हुन् । जुम्लाबाट एसएलसी तहको शिक्षा प्राप्त गरेका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरेर समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसमेत गरेका छन् । जागिरको सिलसिलामा पूरै नेपाल भ्रमण गरिसकेका उनले नेपाली समाजको वस्तुस्थितिबारेमा राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेका छन् ।
साथै, उनीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ, आईएनजीओहरूमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभवसमेत छ । यसै सिलसिलामा ३० वर्षको अनुभव हासिल गरी सरकारी जागिरसमेत छाडेर नेपाली समाज विकासमा होमिएका समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टसँग कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार ः
गैरसरकारी क्षेत्रबाट समाजसेवा प्रवाहमा समाजकल्याण परिषद्को अहिलेको भूमिका के–कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दुवै निकै वृद्धि भएका छन् । धेरैजसो संस्थाको काम सन्तोषजनक नै देखिन्छ भने केही संस्थाको काम भने सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । तर, कतिपय संस्थाको काम भने सोचेभन्दा पनि राम्रो हुने गरेको छ । परिषद्ले पछिल्ला चरणमा आवश्यक सरसल्लाह दिने तथा यिनीहरूको निरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाहरूले कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी योगदान पु¥याइरहेका छन् ?
यिनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् । भूकम्पपीडितको जीवनको सवाल, संरचनात्मक क्षेत्रमा जस्तै विद्यालय निर्माण, भवन निर्माण, त्यस्तै समुदायमा रहेका स्वास्थ्यचौकी तथा अन्य संरचनाहरूसमेत बनाइराखेको स्थिति छ ।
सर्वसाधारण व्यक्तिका सरकारले स्वीकृति दिएअनुसार सरकारको मापदण्डमा रहेर घरहरू बनाएको अवस्था छ । यस्ता संस्थाले सरकारी तथा सामाजिक दुवै क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने विदेशी सहयोग सदुपयोग हुन नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो छ ?
गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त गर्ने धेरैजसो विदेशी सहयोग सदुपयोग हुन नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो । तर, हामीले गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई सदुपयोग गर्न अधिकतम प्रयास गरिराखेका छौं । यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको इमानदारी नै हो । इमानदारिता भयो भने स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
कानुनी कुराभन्दा पनि इमानदारितालाई हामीले मान्यता तथा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेशी तथा स्वदेशी प्राप्त सहयोग सही ठाउँमा प्रयोग होस् भनेर संस्था चलाउने मानिसहरूलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गरेको छौं । उहाँहरूलाई देशको आवश्यकता हेरेर काम गर्न सुझाव–सल्लाह दिएका छौं । हाम्रो देश, गाउँ हामी आफैंले नबनाए कसले बनाउँछ ? यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । अरूको मुख ताक्ने काम राम्रो हुँदैन, जुन सधैंका लागि दिगो पनि हुँदैन ।
हामीले स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग प्राप्त गरेका छौं, त्यो केही क्षणका लागि मात्र हो । यस्तो समयमा हाम्रो भएजतिको सम्पूर्ण शक्ति तथा प्रयास प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चाहे ती शैक्षिक होस् वा अनुभव होलान् । यी सबैलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यही मान्यताका साथ हामीले गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई जागरूक बनाएका छौं । कतिपयले यस्ता कुरालाई अंगीकार गरेको अवस्था छ ।
तर, कतिपयले यसलाई बेवास्ता गरेको पनि देखिन्छ । सबै ठीक छन् भन्ने अवस्था पनि छैन र सबै बेठीक छन् भन्न पनि सकिँदैन । साथै, कहीँ न कहीँ गैरसरकारी संस्थाबाट सेवा पुगिराखेको अवस्था छ । यिनीहरूमा पर्याप्तता भने छैन । बजेटअनुसार अधिकतम सफलता हासिल गर्न हामीले पहलसमेत गरेका छौं । तर, समस्या के छ भने नियतवश नै जानेर पनि नजानेजस्तो गर्ने मानिसहरूले नै हामीलाई कहिलेकाहीँ चुनौती दिएको अवस्था छ । यस्ता मानिसले नियमन संस्थाहरूलाई नै चुनौती दिने गर्छन् । हामीभन्दा गैरसरकारी संस्था चलाउने मानिसहरू बलिया छन् ।
गैरसरकारी क्षेत्र फराकिलो छ, जसमा उद्योगपति, राजनीतिककर्मी नै लागेका छन् । साथै, नेपालमा भएका अन्य शक्ति सबै यसमै लागेको अवस्था छ । शक्तिशाली राजनीतिकर्मीहरू पनि यसैमा भएकाले यो कानुनी तरिकाभन्दा पनि उनीहरूको तरिकाले चलेको अवस्था छ । हाम्रो अनुगमनले यस्ता संस्थालाई छोएको अवस्था छैन, जो शक्तिको पछाडि दौडिरहेका छन् । तर, इमानदारी तरिकाले अगाडि बढ्नेहरूका लागि परिषद्ले कुनै रोकतोक गरेको छैन ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले समाजलाई योगदान गर्ने भन्दा ओभरहेड कस्ट अर्थात् प्रशासनिक खर्च बढी गरेको पाइन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि परिषद्ले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
यसका लागि परिषद्ले मापदण्ड नै तोकिदिएको छ । यसमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई २० र ८० को रेसियो नै तोकेको अवस्था छ । कुनै पनि संस्थाले ८० प्रतिशत रकम प्रोजेक्टमा खर्च गर्नुपर्छ भने अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्छ भनेर परिषद्को मापदण्डले तोकिदिएको छ । तर, कतिपयले चतु¥याइँ के गर्छन् भने प्रोजेक्ट कस्टभित्रै प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बजेटसमेत समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यसलाई प्रोजेक्ट कस्ट हो भन्ने उनीहरूको आफ्नै व्याख्या वा मान्यता छ । त्यसमा पनि सामाजिक क्षेत्रको कुरामा बेवास्ता गरेको पाइन्छ, उनीहरूलाई यस्ता लुप होलहरू चाहिएको छ, जसले आफ्नो भएको बजेटलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यस्तालाई संस्थालाई प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत पनि लाग्दैन । कतिपय संस्थाले ७ देखि १२÷१४ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा कार्य सम्पन्न गरेको अवस्था पनि छ ।
केही यस्ता संस्था छन्, जसले समाजसेवाको बहानामा नाटक गर्नेहरूका लागि २० प्रतिशतले पनि पुगेको छैन । हामीले प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर २० प्रतिशतमै सेन्सर गरेको अवस्था छ । साथै, यसले धेरै नियन्त्रण भएको अवस्था पनि छ ।
परिषद्ले गैरसरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के–कस्ता प्रयास वा उपाय अवलम्बन गरेको छ ?
यो एउटा संस्थागत कुरा हो । यो एउटा व्यक्तिको विवेक तथा विज्ञताले नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी आधार छ । कानुनी आधार भएपछि त्यसलाई कानुन, नियम प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।
साथै, व्यक्तिको विज्ञता, क्षमता, इमानदारिता र दायित्वमा भर पर्छ । त्यसकारण अहिले भएका निर्देशिका तथा नियमावलीले राम्ररी सञ्चालन गर्न नसक्ने ठानेर परिमार्जित गरेका छौं । निर्देशिका तथा नियमावली अझै पनि परिमार्जित हुने अवस्थामा छन् ।
समयसापेक्ष रूपमा यसको संशोधन भएर अगाडि बढिराखेको अवस्था पनि छ । हामीले यिनीहरूलाई सही बाटोमा हिँडाउने कडी भनेकै नीति–नियम हो । नियमभन्दा बाहिर गएर हिँडाउन सम्भव पनि छैन । परिषद्ले बनाएको निर्देशिका तथा नियमका आधारमा संस्था सञ्चालन भएमा त्यो संस्था स्वयं आफू र राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।
परिषद्को नियम तथा आदेशहरू उल्लंघन गर्ने संघ संस्थालाई के–कस्तो कारबाही गरिएको छ ?
कुनै–कुनै संस्था अनुगमन गर्दा परिषद्को नियम तथा आदेशहरू उल्लंघन गरेको पाइएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा अबदेखि त्यस्तो नगर्न सुझाव, सल्लाह दिने गरेका छौं । तर, संस्थाहरूलाई कारबाही नै गर्नका लागि परिषद्का संस्थाका नियमहरू पर्याप्त छैनन्, जसले गर्दा कारबाही गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कारबाही गर्न दुईवटा समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा एउटा उखान छ, त्यो के हो भने डाक्टरभन्दा रोगीहरू बलिया तथा जान्ने छन् भन्ने हो । अर्को समस्या, हामीले जुन हतियार प्रयोग गर्छौं, त्यो हतियार नै कमजोर छ । हाम्रो हतियार भनेको नियमावली र नियमहरू नै हुन् । परिषद्का नियम र निर्देशिकाअनुसार नै संस्थाहरूलाई कारबाही हुँदै आएको छ ।
परिषद्का हालका प्रमुख चुनौती के–के हुन् ? साथै, यस्ता प्रमुख चुनौती न्यूनीकरण गर्न परिषद्को भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
परिषद्मा हाल मुख्य दुईवटा चुनौती छन् । एउटा, आन्तरिक चुनौती र अर्को हो— बाह्य चुनौती । आन्तरिक चुनौती भन्नाले हामी आफैं सुधार हुनु हो । परम्परागत शैलीले हाम्रो परिषद्, कार्यालय तथा यहाँका कर्मचारीहरू चलेका छन् । हामीले सर्वप्रथम यसलाई सुधार्न सक्नुपर्छ ।
यस्ता चुनौतीहरू सुधार गर्न अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि छ । किनभने लामो समयदेखि बिग्रिरहेको बानीलाई सुधार गर्न गा¥हो छ । साना बालबालिकाको बानीबेहोरा सुधार गर्न जति सहज हुन्छ, ठूला मानिसहरूलाई सुधार्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन, वर्षौंदेखि बिग्रिएको बानी एकैपटकमा सुधार्न गाह्रो छ । अर्को चुनौती भनेको बाह्य कुरा हो, यहाँ रहेका एनजीओ तथा आईएनजीओ इमानदारीपूर्वक काम गर्न नेपालमा आएका छन् वा छैनन् भन्ने हो । साँच्चै नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउन आएका संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छैन । तर, जसले आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य भुलेका छन् त्यस्तालाई सही बाटोमा हिँडाउनु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो ।
मुलुक संघीयतामा गइरहेको अवस्था छ । यस्तो समयमा परिषद्को स्वरूप के–कस्तो हुन्छ ?
परिषद्ले अहिले एउटा उपसमिति बनाएर प्रादेशिक खाका के–कस्तो हुने त भन्ने कुरामा गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । अबको एक–दुई महिनाभित्र केही ड्राफ्ट रिपोर्ट पेस हुन्छ । यसैबमोजिम हामी अगाडि बढ्ने हो, किनभने परिषद् स्वायत्त संस्था हो ।
यसको आम्दानीको स्रोत सीमित छ । आम्दानीको स्रोत नबढाई शाखा विस्तार तथा कार्यालय विस्तार गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थपन गर्ने आदि कार्यहरू असम्भवजस्तै हुन्छ । यिनै चुनौतीका बाबजुद परिषद्लाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई आर्थिक तथा कामको पाटोबाट हेर्नु जरुरी हुन्छ । अहिले देश संघीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परिषद्ले आफ्नो सेवालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेमा बेलाबेलामा छलफलसमेत हुने गरेको छ ।
परिषद् संघीयतामा जान नसके खारेज गरिदिए के हुन्छ ?
मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा समेत परिषद्लाई खारेज गर्ने कुरामा म त्यति सान्दर्भिकता देख्दिनँ, किनभने यसले समाज विकासमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ । परिषद्ले यसलाई अझ बलियो बनाएर एकद्वार नीतिमा लगेर प्रादेशिक स्तरमा यसको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यसो गरेको खण्डमा परिषद्ले समाज विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
नियम उल्लंघन गरी आफूखुसी खर्च गर्ने र सरकारलाई जानकारीसम्म नदिई काम गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा किन ल्याउन सकिएको छैन ?
परिषद्को नियम उल्लंघन गरी आफूखुसी खर्च गर्ने संघ–संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, संस्थाहरूलाई कारबाही नै गर्न परिषद्लाई दुईवटा कुरा बाधक बनेका छन् ।
एउटा बाधका नियमावली निर्देशिका नै हो । अर्को बाधक भनेको जो नियम–कानुन नटेर्ने र कानुनभन्दा माथि हुन खोज्छ, साथै त्यस्ता संस्थाहरू शक्तिकेन्द्र धाउँछन् र कानुनभन्दा माथि हुन खोज्छन्, त्यस्ता मानिसले चलाएका संस्थालाई नै कानुनको दायरामा ल्याउन कठिन हुने गरेको छ ।
तर, ठीक बाटोमा हिंड्ने संस्थाको कोही पनि हुँदैन, त्यस्ता संस्थाका लागि केवल राज्य मात्र हुन्छ । त्यसैले गर्दा नियम उल्लंघन गरी आफूखुसी खर्च गर्ने कतिपय संस्थालाई त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ र परिषद्को नियमबमोजिम कारबाहीसमेत गरिएको छ । साथै, सरकारलाई अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई नियमअनुसार कुनै पनि हालतमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा परिषद् सदैव तयार छ र हुन्छ ।
भूकम्पपछि कति संस्थाहरू दर्ता भए र तिनीहरूको कार्य प्रगति विवरण कस्तो छ ?
भूकम्पपछि नेपालमा धेरै संघ–संस्था भित्रिए । कोही १५ दिने त कोही एक महिनेदेखि लिएर तीनमहिने, छमहिने तथा एकवर्षेसम्मका संस्थाहरू भित्रिएका थिए । तर, कतिपय भने अलिकति दिगो रूपमा काम गर्ने खालका थिए । कतिपय भने भूकम्प नआउँदादेखि नै नियमित रूपमा काम गरिराखेका छन् । छोटो समयका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू फर्किएर गएको अवस्था छ ।
लगभग वर्ष दिनका लागि भनेर आएका संस्थाहरू स्वदेश फर्केका छन्, तर वर्षौंका लागि सहमति गर्ने संस्थाहरूले हाल पनि आफ्नो कार्य अगाडि बढाइराखेका छन् । भूकम्पपछि करिब ६ सय संस्था थपिएका थिए । तर, तीमध्ये अधिकांश संस्था फर्केका छन् । जसले थोरै राहतका सामग्रीहरू ल्याएका थिए, त्यस्ता संस्थाहरू लामो समय नेपालमा बसेनन् । अहिले जम्माजम्मी २ सय ५० को हाराहारीमा त्यस्ता संस्था छन् ।
यिनीमध्येमा पनि बढी भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एउटा जिल्लामा करिब २५ देखि ३० वटा संस्था छन् । भूकम्पप्रभावित जिल्लाको संख्या ३१ भए पनि जम्मा १४ जिल्लालाई बढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा सरकारले घोषण गरेको थियो । भूकम्पले बढी प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको ध्यान बढी छ । अधिकांश संस्थाको काम सन्तोषजनक छ । कतिपयको काम त सोचेभन्दा राम्रो पनि पाइएको छ ।
तर, कतिपयको भने भनेजस्तो काम गर्न नसकेको अवस्था छ । आईएनजीओ मात्र होइन, एनजीओले पनि राम्रो काम गरेका छैनन् । आईएनजीओ भनेको एक खालको डोनर हो । हाम्रा एनजीओले त राष्ट्रिय दायित्व बोकेर काम गर्नुपर्ने हो, तर यिनीहरूको पनि लापरबाही छ । त्यही लापरबाहीका कारण कतिपयले आफूले भनेजस्तो कार्य गर्न नसकेका हुन् ।
समाजसेवाका लागि वैदेशिक र जनस्तरबाट प्राप्त हुने सहयोग दुरुपयोग भएको छ कि छैन ? यसबारेमा परिषद्ले कस्तो खालको अनुगमन गरेको छ ?
समाजसेवाका लागि वैदेशिक र जनस्तरबाट पर्याप्त रूपमा सहयोग भएको छ । उक्त सहयोग बेलाबेलामा दुरुपयोग भएको पाइन्छ । त्यसलाई परिषद्ले स्विकारेको पनि छ । नियन्त्रणका कार्य अगाडि बढेका छन् । त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्न मुख्य दुई ओटा समस्या छन् ।
इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूका लागि जे कुरा कागजमै सहमति भएको छ, त्यहीअनुसार कार्य गर्दै जाने संस्थाका लागि कुनै समस्या भएन । जसलाई बदमासी गर्नु छ, जसको नियतिमै खराबी छ तिनीहरूलाई जति सम्झाए पनि उस्तै हो ।
सुझाव, सल्लाह नमान्ने संघ–संस्थालाई परिषद्ले कडाइ गर्न खोजेको खण्डमा शक्तिकेन्द्र धाउने र परिषद्लाई नै चुनौती दिने गरेको पाइन्छ । अनुगमन गरेर अटेर गर्नेहरूको हकमा कारबाही गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । नेवा (नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी) भन्ने नाम चलेको संस्थालाई कारबाहीको कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालित असल छिमेकी अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने संस्थालाई पनि कारबाही अगाडि बढाइएको छ, जुन कोरियाबाट सञ्चालित संस्था हो । त्यति मात्र होइन, कानुनबमोजिक काम नगर्ने कुनै पनि संस्थालाई कारबाही गर्न परिषद् सदैव तयार छ ।
सरकारले के गरेको खण्डमा परिषद्ले नेपालमा भएका एनजीओ–आईएनजीओहरूलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ ?
यदि परिषद्लाई सरकारले एक महिनाको समय दिएर पूरै जिम्मेवारी दियो भने नेपालमा भएका सबै एनजीओ, आईएनजीओहरूलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ ।
जिम्मेवारी भनेको संस्थाबाट भएका गल्ती, त्रुटि वा कुनै कार्य गैरकानुनी गरेको खण्डमा परिषद्ले अनुगमन तथा कारबाही गर्न पाउनु हो । गलत लागेका, राष्ट्रलाई हित नहुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्नेलाई निकाल्न पाउनुपर्ने, त्यस्तालाई भिसा थप गर्न नदिने कार्यलगायतका विषयको कुरामा परिषद्लाई स्वतन्त्र बनाउने हो भने एक महिनामा यस्ता संस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
इन्जिनियरिङ समाज कल्याण परिषद् एनजीओ/आईएनजीओ